Super Crunchers Ian Ayres | Martech Zone
Super Crunchers Ian Ayres dere
Sunday, Eprel 19, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Readersgachi agụ m blog mara na m na mgbe kemgbe ihe na-akwado maka nha. Arụ ọrụ na ahịa nchekwa data meghere anya m na ike nke data na ikike ya iji nyere aka rụọ ọrụ ahịa. Ga Webtrends Na-eme 2009 Conference bụ ihe na-akpali akpali ma tinye m na mwakpo iji hụ na ụlọ ọrụ na-atụle ma nyochaa usoro ịzụ ahịa ha n'ịntanetị.
Webtrends akpọ òkù Ian Ayres kwuru ikwu banyere akwụkwọ ya, Ndị Super Crunchers. Enwetara m akwụkwọ ahaziri onwe m na mmemme ahụ wee bido ịgụ ya na ụgbọ elu. Enwere m oge siri ike idebe ya kemgbe!
Echere m na enwere ike ichikota isi okwu nke akwukwo a na otu ahịrịokwu:
Anyị na-ahụ mgba nke ọgụgụ isi, ahụmịhe nke onwe, na echiche mmụọ nke na-ebu agha megide ike dị egwu nke ọnụọgụ.
Ayres na-enye ọmarịcha ihe atụ gafee ụdịdị dị iche iche na ọgwụ, gọọmentị, agụmakwụkwọ, ụlọ ọrụ ihe nkiri… na ọbụlagodi mmanya mmanya… iji kwado ọnụọgụgụ ọnụọgụ. Ihe atụ niile na-akwado mbido na nchịkọta data na nyocha zuru ezu (yana ụfọdụ nlebara anya pụrụ iche na nyocha nyocha) nwere ike inye anyị ihe ọmụma iji meziwanye yana ọbụnadị ịkọwapụta nsonaazụ azụmahịa.
Ọbụlagodi na ị bụghị onye nyocha, nke a bụ nnukwu akwụkwọ maka ọchụnta ego ma ọ bụ ahịa ọ bụla iji bulie.
Tags: ngwa iphone
Nlekọta Mgbasa Mgbasa Ozi bụ Must!
Nyocha + Creative = Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Bill Strahan kwuru
Enwere m ọkara site na akwụkwọ a n'onwe m. Are nwuru anwu ma nwee obi ụtọ ịnụ ka ọ na-ekwu. M na-eji echiche iji kpalie ụzọ ndị ka mma iji rụọ ọrụ ọrụ mmadụ (chee echiche ire n'ime "ngwaahịa" nke ịkwụ ụgwọ na uru.
Daalụ maka nnukwu post.
Daalụ Bill! Gwa gị eziokwu, enwere m akwụkwọ ahụ karịa ngosi ya! Echere m na agụụ ya maka nyocha data pụtara ìhè karịa na ederede Mr. Ayres.